Thwebula Speedtest 3.2.26 – Vessoft
Speedtest – a software ukuhlola speed kwakho uxhumano lwe-inthanethi. Speedtest wenza ukuhlolwa in the mode othomathikhi bese emva kokuphothulwa isheke libonisa ulwazi mayelana ijubane yokudlulisela noma yokwamukela idatha kusuka network kudivayisi yakho. Isofthiwe kwenza ukubuka ulwazi mayelana ubukhulu ping, khetha iseva eqhelile futhi ulungiselele yokukala. Speedtest ikuvumela ukubuka igrafu ukuzinza uxhumano qhathanisa idatha nge ukuhlolwa odlule. Speedtest iqukethe amathuluzi for yokudlulisela yokuvivinywa kwedatha zokuxhumana nabantu.
Speed ​​test yokudlulisela noma reception idatha
Choice of a server eyihlane
Choice of the yokukala ijubane
Ubonisa yangaphakathi nangaphandle IP address-
Igrafu of the uxhumano network
Amazwana on Speedtest:
Speedtest Ahlobene software:
English, Afrikaans, Français, Español... Voice Changer 3.1.11